Abakhiqizi & Abathengisi beLadle Reflexories - China Fektri yaseChina
Ingxenye ye-Arc Foving Agent ye-ladle yokucwilisa isithando somlilo
Umkhiqizo we-RMH-LF usetshenziselwa isithando sokucoca nge-ladle, umkhiqizo we-RMH-DH usetshenziselwa isithando se-arc esenziwe ngensimbi. Kusetshenziswa lo mkhiqizo kuzoqinisekisa ukuthi i-arc ifakwa ngaphansi kwenqubo yonke yokuncibilikisa. Izonciphisa ukulahleka kwemisebe yokushisa kwe-arc futhi kwandise ukusebenza kahle kokushisa. Ukuguguleka kwemisebe eqondile ngokuqondile kusuka ekushiseni okuphezulu kwe-arc kuya ku-lining kungagwenywa, isikhathi sokuphila selayini sizoba isikhathi eside. Izinga lokuphindaphindeka lizoba ngaphezulu futhi isikhathi sokuncibilikisa sizofushane.